The Honor 8 amalite imelite na gam akporo 7.0 Nougat | Akụkọ akụrụngwa
O meela otu ọnwa kemgbe ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara ọkwa mwepụta nke mmelite maka Honor 8 ma n'ụtụtụ a, akụkọ ahụ gbasara site na netwọk banyere ngwaọrụ mbụ natara nsụgharị ọhụrụ a site na OTA. Dị ka ọ mere na gara aga releases nke update nke sistemụ, a ọhụrụ version adịghị a tọhapụrụ ụwa na ha bụ naanị ụfọdụNdị ọrụ s na Japan ọkachasị ndị natara ọkwa mmelite ahụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ụdị gam akporo gam akporo Nougat amalitelarị maka ngwa ndị a, yabụ ọ bụ obere oge tupu ọ malite iru ndị ọrụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye na mmelite a, ndị ọrụ nke Honor ngwaọrụ (Huawei) amaraworị na a na-emelitekwa oyi akwa nhazi, na nke a, ụdị ọhụrụ EMUI 5 ga-abata. Ihe kachasị mma banyere mmelite ọhụrụ a n'ihe banyere EMUI bụ mmelite na ngosipụta nke ọkwa, ihe kachasị mma na oriri batrị na nkwado maka ụmụ amaala ọtụtụ windo.
Enweghị data ọ bụla banyere ọbịbịa nke ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ na mba ndị ọzọ ebe ngwaọrụ dị, mana emeelarị ihe mbụ, nke bụ ịmalite gam akporo 7.0. Ugbu a ọ ga - abụ ụbọchị nke mmelite ahụ na mmelite niile ọ na - eweta na ngwaọrụ ndị a na - abata na eze, anyị nwere olile anya na ọ gaghị ewe ogologo oge ka ha na - adọ aka na ntị. na akaụntụ Huawei nke Twitter na Japan na ndị ọrụ nwere ike imelite Honor 8 ha ozugbo enwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » The Honor 8 amalite imelite na gam akporo 7.0 Nougat
Movistar na-ekwuputa mgbasa ozi na 4K maka 2017 ma gosipụta Yamaha MotoGP